Umhlangano WoFakazi BakaJehova eThekwini | News24
Umhlangano WoFakazi BakaJehova eThekwini
OFAKAZI baka-Jehova bahlele umihlangano wezinsuku ezintathu ozoba se-Moses Mabhida Stadium kusukela ngomhlaka 31 August kuya ku-02 September. Lo mhlangano uyingxenye yeminye imihlangano eqale ngomhlaka 8 May May ezifundazweni ezahlukene. Isiqubulo salo nyaka sizobe sithi “Yiba Nesibindi”.
Ngaphambi kwalemibuthano kunemikhankaso kuwo wonke umhlaba yokumemela bonke abangakwazi, nabathanda ukuba khona njengoba kuyobe kungenwa mahhala.
Le mibuthano izoba sezindaweni ezingaphezu kuka-180.
Kulindeleke izihambeli ezingaphezu kuka- 35 000 kulo mhlangano ozoba seThekwini nozobe uqhutshwa ngolimi lwesiNgisi, IsiZulu noLimi lwezandla ngesikhathi esisodwa.
Kulezi zinsuku ezintathu kuzojatshulelwa izinkulumo ezingaba u-54, izingxoxo nokulalelwayo kanye nokubukwayo (amaVideo).
Kuzoba nebhayisikobho enesihloko esithi “Indaba ka-Jona Isifundisani Ngokuba Nesibindi Nesihe” eyobukwa esimisweni sangeSonto ntambama.
Usuku ngalunye ekuseni nantambama kuzoqaliswa nge-video yomculo obukwayo olungiselelwe lo mhlangano.
UMnumzane Sheperd Nkosi ongusihlalo womhlangano woFakazi BakaJehova eThekwini uthe, “Uma ubukela izindaba namuhla, ubona ngokuthe ngqo ukuthi abantu bonke, abancane nasebekhulile babhekene nokukhathazeka nokwesaba kunanini ngaphambili.
Kudinga isibindi ukubhekana nalokhu kucindezeleka.
Wonke umuntu wamukelekile kulo mhlangano ukuzozibonela ukuthi iBhayibheli lingasisiza kanjani sibhekane nalokhu kuphila okugcwele iziyaluyalu.” Ngeminye iminingwane ngalomhlangano vakashela ingosi ethi www.jw.org/zu ukubona sonke isimiso salo mhlangano kanye ne Video ephathelene nalomhlangano. Ukuthola ulwazi olwengeziwe thintana no Muzi Hlongwane enombolweni ethi : 082 462 5012